Tontolo Arabo: Aorian’i Tonizia, iza ny manaraka? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Janoary 2011 18:41 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Español, 日本語, polski, Português, Italiano, বাংলা, Ελληνικά, English
Taorian'ny zava-nitranga tany Tonizia izay nanery ny filoha teo aloha Zine El Abidine Ben Ali handositra ny firenena, maro ireo mponin'ny aterineto avy amin'ny tontolo Arabo no manontany: “isika ve ny manaraka?”
Ilay Ejiptiana mpanao gazety sady mpitoraka bilaogy Mona Eltahawy, izay nanaraka akaiky nandritra ireo hetsi-panoherana Toniziana teo amin'ny tontolon'ny Twitter, dia nanoratra lahatsoratra-be-mpamaky tamin'ity maraina ity nitondra ny lohateny hoe “Tonizia maromaro, azafady” izay nilazàny fa ny tontolo Arabo dia mitazona ny fofonainy miandry sao hahita “Tonizia iray hafa” mipongatra:
Ben Ali migadra na voasesitany anaty safidy mbola azon'ny fitondrany ivelomana, mbola manjavozavo ny tohin'ny ara-politika. Saingy mibanajina an'ity firenena madinika Arabo ity izao tontolo izao ary manontany tena raha ity no dingana voalohany amin'ny fanadiovana ny faritra amin'ireo raibeny.
Ilay mpandalina Juan Cole koa dia naminavina ny mety hahatonga an'i Tonizia ho fiandohan-javatra goavana be:
…Saingy satria sady Sionita no Arabo i Tonizia, tsy dia olana loatra ho an'ny Ejiptiana, Alzeriana, Siriana ary Jordaniana ny maka ny fomba fanaony sy ny fandresen-dahatrany ho amin'ny tombontsoan'ny tokantranony manokana, izay mahatonga azy hanana toerana lehibe ho fakan-tahaka. Amin'izao fotoana ny fifanatonan'ireo manam-pahaizana nahazo diplaoma ambony BA, ny matihanina, ny mpiasa, ny mpiompy, ny liam-pivoarana ary ny Silamo mafàna fo izay mitondra mankamin'ny demaokrasia parlemantera dia toa manana akony be kokoa eo amin'ny tontolo Arabo noho izay fitondrana tsy refesi-mandidy entin'ny ayatollah any Iran (ny Sionita tsy manana ayatollahs). Andrasana sisa raha ilay Tonizia kely no ho lasa fiandohan-javatra, na iray amin'ireo efa ratsy fiaingàna.
Mandritry ny tontolo andro, fihetseham-po toy izany no manako manerana ny Twitter sy ny tontolon'ny fitorahana bilaogy Arabo. Mandefa tweets ilay Saodiana mpanao gazety, Ebtihal Mubarak (@EbtihalMubarak) :
Raha hitohy hitranga ny tsy ampoizina tsy ho i Ejipta no manaraka ny revolisiona Toniziana fa i SYRIA. Hisy ankehitriny ny tontolo Arabao vaovao#Sidibouzid #Syria
“Majnoon Habibi” (@majnoon4) manoratra, mitovy amin'izay lalan-jotra izay ihany:
androany Tonizia , rahampitso i Syria fasista. Miàla any ny revolisiona. Hitondra demaokrasia ho an'ny Afovoany Atsinanana Arabo.
Noforonin'ilay Ejiptiana @ZeinabSamir
Syrian Arwa Abdulaziz (@arwa_abdulaziz) koa milaza ny ampitso fa ho i Siria no hidaraboka manaraka:
Mihira izao tontolo izao androany [Hiram-pirenena Toniziana] ary rahampitso Hihira izy ireo raha sitrak'Andriamanitra [Hiram-pirenena Siriana] #Tunisia #Syria
Mahatsapa tahaka izany ilay Siriana, Yassine Essouaiha (@syriangavroche):
Mba ho voarain'ireo olon-doza ireo ny lesona ka hijery tsara ny vahoaka: ny hanoanana no pitik'afo mahatonga hatezerana; tsy ny fivavahana, na sekta, na “fitna”, tsy ny fifandiran'ireo mpitarika antoko samihafa
Na eo aza ny fanantenana, na izany aza, manamarika i Nader Haddad (@NaderHaddad) fa ny masoivohom-baovaom-panjakana Siriana dia tsy niteny momba ny fitroàran'ny vahoaka tany Tonizia:
Tsy nisy fitenenana na kely akory aza momba ny fitroàran'ny vahoaka tany #Tunisia nataon'ny masoivohom-baovao ofisialy ao #Syria. http://bit.ly/g4xNY8
Na inona zavatra mbola hitranga mety ho hita, dia tsy azo lavina fa niteraka onjam-panantenana fiovàna namakivaky ny tontolo Arabo ny fitroàran'ny Toniziana.